नेपालमा सेना घटाउने, बढाउने कि हटाउने ? - Damauli Khabar
Home/All/नेपालमा सेना घटाउने, बढाउने कि हटाउने ?
Damauli KhabarSeptember 17, 2021
नेपाल जस्तो दुई ठूला राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको सानो मुलुकमा सेनाको आवश्यकता छ कि छैन त्यो सोचनीय विषय हो । झन्डै १ लाख सेना भएको हाम्रो देशमा सेनाका लागि नेपाल सरकारले यो वर्ष ५१ अर्ब चार करोड ४० लाख वार्षिक बजेट विनियोजन गरेको छ। देशका नागरिकहरूको पनि सेनालाई लिएर २ धार छ । एकथरी नागरिक नेपालमा विस्तारै नेपाली सेनाको पनि औचित्य समाप्त भएको भन्छन्, किनकी सेनाकै घेरामा राजा वीरेन्द्रको हत्या हुँदा पनि सेना चुपचाप नै थियो। अब तपाईं नै भन्नुहोस्, यदि सेना भएन भने के हुन्छ ? अहिले सेनाले गरेको काम अरू संगठनले गर्न सक्छन्, कि सक्दैन् ? संसारका सबैभन्दा ठूला सैन्य राष्ट्रबीच यो सानो देशको रक्षा बाहिरी शक्तिबाट गर्न नसक्ने अवस्थामा सेनाको औचित्य रहन्छ र ?